२६० स्थानीय तहको नतिजा: कुन दलले कति पालिका जिते ? (विवरण सहित) • raradiodarpan.com
२६० स्थानीय तहको नतिजा: कुन दलले कति पालिका जिते ? (विवरण सहित)
वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा आउनेक्रम जारी छ । मंगलबार बिहान साढे १० बजेसम्म २६० पालिकाको नतिजा आएको छ ।
अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले १ सय १९ पालिकामा जित हात पारेर पहिलो नम्बरमा छ । नेकपा एमालेले ७२ पालिका प्रमुख/अध्यक्ष जित्दै दोस्रो नम्बरमा रहेको छ । ०७४ को चुनावमा पहिलो पार्टी बनेको एमालेले यसपालि अहिलेसम्म साढे २६ प्रतिशत पालिकामा जित हात पारेको छ ।
तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रले ५४ पालिकामा जितेको छ भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले ४, जनता समाजवादीले ३ ठाउँमा जित हात पारेका छन्। नेमकिपा, जनमोर्चालगायत केही पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।
कसले कहाँ जिते ?
काभ्रेपलाञ्चोकको कोसीपारिस्थित भुम्लु गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएको छ ।
गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रेमबहादुर भुजेलले पाँच हजार ७९२ मत प्राप्त गरी अध्यक्षमा विजयी हुनुभएको हो । उहाँका निकटतम् प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका प्रेम लामाले चार हजार ५६८ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
त्यस्तै उपाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका जीतेन्द्रमान तामाङले छ हजार ९८ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ । उहाँको निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेकी कल्पना कुमारी श्रेष्ठले चार हजार २९ मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन अधिकृत रुद्र कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
सो पालिकाको वडा नं १ को वडाध्यक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का लेखबाहदुर श्रेष्ठ, वडा नं २ मा नेपाली कांग्रेसका सुजन भण्डारी, वडा नं ३ मा नकेपा एमालेका ज्ञानबहादुर तामाङ, वडा नं ४ मा नेकपा एमालेका लोकबहादुर कुँवर, वडा नं ५ मा नेपाली कांग्रेसका अञ्चलकुमार मोक्तान, वडा नं ६ मा नेकपा एमालेका भरतबहादुर शिवभक्ति, वडा नं ७ मा एमालेकै रमेशराज खरेल, वडा नं ८ मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का मोतीलाल तामाङ, वडा नं ९ मा कांग्रेसका दलबहादुर तामाङ र वडा नं १० मा नेकपा एमालेका केशरमान लामा विजयी हुनुभएको छ ।
जिल्लाका अन्य पालिकामा मतगणना जारी छ ।